sidee ayaan ku akhriyey 52 buug sannadkii tegay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA sidee ayaan ku akhriyey 52 buug sannadkii tegay
Sannadku waa 52 toddobaad. Haddaba, sidee ayaan ku akhriyey 52 buug sannadkii tegay
“Waxaan rogay bogga ugu dambeeya ee buuggaygii 52aad ee sannadkan waanan dhammeeyey. Mar keliya ayaan go’aansaday in aan toddobaad walba akhriyo hal buug. Dabcan, sidaan wada ognahay buugta qaar ka mid ah ayaa qaadan kara wax ka yar badan toddobaad, halka kuwa kale na ay qaadaan karaan maalmo aan gaadhsiisneen toddobaad. Haddaba, haddii aad doonayso in aad ogaato sida ay iigu suuragashay, waan kuu sheegi karaa sidii aan u maamulay in aan sidan sameeyo, weliba u xiisaynaayey in aan ku shaqeeyo.
Tallabada 1aad: Marka hore waa in aad iska dhaadhiciso in aad samayn karto.
Dabcan markaan ku leeyahay 52 buug iyo sannad waa run waxay u yara eg tahay inayna suuragal ahayn in laga miro dhaliyo, aniga ba sidaas ayay ila ahayd markii aan bilaabayey January 2019kii. Haddana waan sameeyey si kasta oo aan u gaari lahaa himiladayda iyo dariiqii aan jeexday. Waan jecelahay wax akhriska, mar kasta na waan isku howlaa. Waxaan akhriyey 21 buug sannadkii 2017kii taas oo aan ogaaday inay u dhigan tahay in aan 2 bilood oo keliya wax akhriyey. Ka dib waxaan go’aansaday in aan samaysto hadaf ka duwan, oo 2018kii waxaanan akhriyey 36 buug taas oo iyana ka dhigan in aan 3 bilood wax akhriyey. Waxaan ogaaday in wax kasta ku xiran tahay hadaf dhigashada taas oo ah waxa kuu muuqanaya oo ay tahay ka miro dhalinta hadafkaas.
Tallaabada 2aad: Wax akhri wax kasta iyo waqti kasta oo aad awooddo.
Waqtiga ugu adag ee aad la kulmayso ayaa ah haddii aad is tiraahdo waqti u samee wax akhrinta. Dabcan aniga ba waan sameeyey sidan. Waxaan jadwal ka dhigtey 30 illa 40 daqiiqo oo subaxdii ah in aan wax akhriyo, waa marka aan u socdo shaqada’e, 1 saac oo ah marka aan qadada u baxo iyo 1 saac oo kale oo ah marka aan guriga imaado. Lakiin, waxaan ogaaday in sidan in badan abuuri karto caajis keenaya in aad marar la soo baxdo dhego-gashiga tilifoonkaaga oo aad wax iska dhegaysato. Ma taqaana imika waxaan sameeyo, waxaan baxaa aniga oo buug gacanta ku sita ama shandada ku wata, taas ayaa keenta in aan dhowr bog akhriyo mar kasta oo aan fursad helo. Dhaqankan waxa uu ii keenay inaan buugga u dhameeyo si sahlan oo aad u faaiido badan.
Tallaabada 3aad: Buugta cod ahaan loo duubo “Audio books” waa saaxiibka ugu wanaagsen.
Halkan marka la joogo ama warbaahinta ba, aniga waxaan u ahay dadkii hore. Waxaan ku haystaa guriga buug daabacan. Waxaan u shaqeeya warbaahinta caalamiga ah, taas oo daabacda wargeysyada, taas ayaa keentay in aan isku dayo ama jeclaado ba buugta cod ahaan lagu duubo, waxaan iibsadaa cajadaha si aan u dhegaysto iyagoo dallacan marka aan guriga ku shaqaynaayo. Audible waa app aad u wanaagsen una fudud. Waxaa laga helayaa buug badan kuwaas oo aan u isticmaalo markaan jimicsiga samaynaayo. Tan kama dhigna in hadafkaygu yahay uun in aan buug badan akhriyo. Maya. Lakiin waa in aan rabo in aan wax korodhsado. Waan xasuustaa markii aan dhegaysanayey buugga Michelle Obama ee Becoming Michelle, oo aan ku dhegaysanaayey codkeeda waxaan moodayay ba inay iyada iga sheekaynayso tariikhda nolosheeda, taas baa keentay in aan ku dhiirrado akhrinta buuggeeda Becoming Michelle.
Tallaabada 4aad: Ku biir meelaha lagu soo bandhigo buugaagta (Book Clubs).
Bishii June ee la soo dhaafay waxaan ku biiray meel lagu soo bandhigo buugaagta ka dib marka la akhriyo (Book Clubs) taas oo bishiiba hal mar la sameeyo kulan, kulankaas oo lagu lafa-guro hadba buugga la soo akhriyey. Waa lagu doodaa oo la isku dhaafsadaa aragtiyaha buugga laga qabo. Waxyaalaha uu ku xooggan yahay iyo kuwa uu ku daciifsan yahay ayaa lagu soo bandhigaa madasha. Tan waxa ay i siisay sababo badan oo aan u sii wado wax akhriska.
Tallabada 5aad: Akhri waxa aad doonto oo jooji waqtiga aad doonayso.
Dabcan maaha in aad wax u akhrido hebel ama heblaayo ba way akhriyeen ee adna akhri, taas oo keliya maaha wax akhriska, se inta badan akhri adigu buugta aad doonayso in aad akhrido, buugta aad doonayso in aad bilaabto billow. Aniga tani waxay iga dhigtay qof ku raaxaysanaya oo haddana si xawli ah u akhrinaya buugaas. Badiyaa waan dhammeeyaa buugga aan bilaabo. Ma ihi dadka buug intay bilaabaan iyagoon dhammayn haddana mid kale ku ag bilaaba, taas wax badan kuma faaaidaynin. Inta badan markaan buug bilaabo haddii aan arko in aanan akhriskiisa ku raaxaysanaynin waan dhigaa, ma sii wado, waxaan is idhaa amateet ayaadan u hayn. Waan ku celiyaa mar kale haddii aan isla sidii dareemo waan iska dhigaa. Mar saddexaad haddii aan arko in buuggan aanu xiise ii samaynin oo aanan ku raaxaysanaynin akhriskiisa waan iska dayaa oo buug kale ayaan raadsada, waayo badiyaa dareemadu been ma sheegaan wax hal mar ka badan.
Tallaabada 6aad: Naqtiin (Gebagabayn).
Dabcan waxaan akhriyey buugaag badan marka loo eego sannadkii tegay. Buugaygii ugu xiisa badnaa waxa uu noqday buugga Colm Toibin ee uu qoray sannadkii 1996dii waa sheeko magaceeda la yiraa (The Story of the Night), taas oo ka sheekaynaysa nin da’ yar oo noolaa hillaadii 1980kii, kuna noolaa waddanka Argentine. Sida oo kale buuga ii noqday mid aan ku noqdo laba jeer waa buugga Sally Rooney ee magaciisa la dhaho (Normal People). Sidaa si la mid ah buugta lama illaawaanka ii ah waxa ka mid ah buugga Patrick Radden Keefe ee (Say Nothing). Buug kasta oo aan akhriyo naqtiin ayaan ku sameeyaa, si aan u xasuusto waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee aan kala kulmay akhriste ahaan.
Hhhhh, Haddaba, uma socdo sannadkan in aan hadaf ka dhigto wax ka badan hadafkii sannadkii tegay, balse dabcan haddii aan akhriyo 30 illa 40 buug waxaan ahaanayaa mid ku faraxsan, balse madaama aan aad u jecelahay wax akhriska, haddii ba ay dhacdo oo aan sameeyo hadaf iyo score ka sarreeya sannadkii tegay waan idin ogeysiin doonaa”….
W/Q: Ben Kelly.
W/T: Amena Mohamed